पूर्णिमाले कथालेखन तालिम दिने – Mission
पूर्णिमाले कथालेखन तालिम दिने
हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुरले २०३ औं भानु जयन्तीको अवसरमा एकदिने कथालेखन तालिम संचालन गर्ने भएको छ ।
यस क्षेत्रमा कथाकार उत्पादनका लागि प्रतिष्ठानले अषाढ २८ गते एकदिने कथालेखन तालिमको आयोजना गरेको हो ।
तालिममा यस क्षेत्रका एक सय जनाको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले कथालेखन तालिम बागेश्वरी बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसको हल बिहान ७ बजेदेखि शुरु हुने जनाएको छ । प्रतिष्ठानको आयोजनामा र कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा संचालन हुन गइरहेको एकदिने कथालेखन तालिममा तीन जना प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण
यसैबीच सोही अवसरमा बरिष्ठ कवि तथा निबन्धकार भिष्म उप्रेतीलाई तुलसीराम स्मृति पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि भाषा साहित्यमा योगदान दिए वापत कवि उप्रेतीलाई सो पुरस्कारले सम्मान गर्न लागिएको अध्यक्ष महानन्द ढकालले जानकारी
दिए । तुलसीराम ढकालको सम्झनामा २०६२ सालमा स्थापना भएको पुरस्कार हो । अध्यक्ष ढकालका अनुसार प्रत्येक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आइएको
छ । यसअघि दुई हजार एक सय एक रुपैंया राशी रहेको यस पुरस्कारबाट पुष्प अधिकारी अञ्जली (चितवन), पद्मराज जोशी (कैलाली), राजेन्द्र प्रसाद धिताल (बर्दिया), प्रा.डा. गोपाल प्रसाद शर्मा अधिकारी (बाँके), सृजन लम्साल (बाँके), डा. दिपक गौतम (सुर्खेत) र टिकाराम उदासी (दाङ) सम्मानित भैसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार २७, २०७३ 2:29:04 PM |
Prevपूर्णिमाले कथालेखन तालिम दिने
Next‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान शुरु